RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MIERITRERITRA AM-PIALA MORAMORA AN-DRAJOELINA ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MIERITRERITRA AM-PIALA MORAMORA AN-DRAJOELINA ISIKA
Nindramiko ny tenin’ny filoha Ravalomanana Marc hoe : « aza matahotra minoa fotsiny ihany » hoy ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara Ralaiseheno Guy Maxime androany teny amin’ny Magro Behoririka.Fahombiazana ho an’ny filoha io tenin’andriamanitra io hoy izy, ary tsy namitaka azy hatramin’izao. Misy ny fisalasalana amin’ny fiatrehina ny tolona hoy Guy Maxime, hoe inona ihany ity fihetsika ataon’ny mpanelanelana ity. Aiza ho aiza ny famaranana ny tolona atrehintsika ?… Na eo aza izany dia misy ny hoe aza matahotra minoa fotsiny ihany. Raha jerena ny zavamisy tao anatin’izay telo taona sy tapany izay hoy ity olomboantendry avy eto Analamanga ity, dia misy hatrany ny fampihorohoroana antsika amin’ny famahana ny krizy indrindra ny hoe tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana Marc. Ny mpifanandrina amintsika hoy izy, dia milaza fa tsy mmbola fotoana hiverenany izao. Nofinofin’ny vahoaka anefa ny fahatongavan’i dada ary izy efa nilaza fa aza matahotra mino fotsiny ihany. Rajoelina hoy ity mpanao politika ity, tany Betroka milaza fa tsy maintsy ataontsika izay hahazoana an’i Remenabila ao anatin’ny iray na roa volana, kanefa hatramin’izao tsy voavaha. Ny tiana hahatongana hoy izy dia olomboahosotra ny filoha Ravalomanana Marc fa na eo aza izay paika izany dia tsy maintsy tonga izy. Niditra teto Simao kanefa nivoaka mangingina. Tsy fanao izany hoy Guy Maxime, fa tsy maintsy manome haja ny vahoaka ianao hoe izao no anto-diako teto. Noho izany dia paipaika namboarina io. Mbola ao anatin’ny tolona isika ary aoaka hatambatra ny hery. Ho antsika hoy izy, dia hanao izay tandrify antsika ary ny filoha ihany koa dia hanao izay tandrify azy. Mahakasika ny fivoriana ara-potoana ho any Ct dia nambarany fa fanontaniana 450 no apetraka amin’ireo mpikambana ao anatin’ny governemanta amin’ity herinandro ity. Tsy hamelanay moramora io hoy ity olomboantendry ity, fa manana zo izahay amin’ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana. Manoloana ny raharaham-pirenena dia tsotra ny ady atrehintsika. Tsy hoe afa maina Rajoelina raha nanongana ny filoha Ravalomanana Marc. Tsy mifarana izany raha tsy fongotra ny mpanao politika mitsetsitra ny harem-pirenena, ny miaramila tsy manao afa tsy ny fanonganam-panjakana hampisondrotra grady azy. Aoka ny miaramila hoy Guy Maxime hanao ny asany, ny mpiasam-panjakana torak’izany. Ao anatin’ny fotoana hiveranana amin’ny ara-dalàna isika hoy izy, ary ny filoha Ravalomanana Marc no mitarika izany. Ady sarotra izany. Namafisiny fa tsy maintsy atao ny enquête momba ny andramena, ny airbus, ny kianjan’ny rugby. Tsy mieritreritra ny am-piala moramora an-dRajoelina isika.
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 octobre 2012 Catégories Politique
6 pensées sur “RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MIERITRERITRA AM-PIALA MORAMORA AN-DRAJOELINA ISIKA”
Dila indray ny 18!!!!
Ka ny tena mampé an’ny fouza mianakavy anie ka izy ireo ihany no fandainga « ils mentent comme ils respirent » i Ramenabila anie ka i Radomelina ihany, dia mody ny vahoaka no ahodikodina eo ! fantray anie fa ataonareo daholo izay hampiala an’ireny olona any ambanivohitra ireny any amin’ny taniny satria nahoana « Misy harena an-kibon’ny tany tianareo trandrahana ao dia mody lazaina fa i Ramenabila no manafika kanefa ianareo mianakavy no mody manao sarin’ady tena mamono mba hahazahoana ny laka » Hoavy tsy ho ela ny farany e !! wait and see !
MAHANDRASA O ANDRIAMANITRA TSY ANDRIN’NY HAFA ANDRITSIKA O
24 octobre 2012 à 7 h 26 min
« Tsy mieritreritra ny am-piala moramora an-dRajoelina isika » !
Dia amin’ny fomba ahoana aza izany ê ? Ny vahoaka, ary i Sahondra-Vololona io efa sasa-miandry !
Précédent Article précédent : Hataon-dry « Gendarme-Militaire » fianarana mitifitra ireo vahoaka any Atsimo
Suivant Article suivant : Vorona azon’adala ny Madarail !